बाक्लो हुस्सु, कुहिरोले तराईको जनजीवन प्रभावित, भोलि र पर्सि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने ! – Mission Khabar
बाक्लो हुस्सु, कुहिरोले तराईको जनजीवन प्रभावित, भोलि र पर्सि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने !
मिसन खबर २० पुष २०७८, मंगलवार ०९:२०
काठमाडौं । बाक्लो हुस्सु, कुहिरोका कारण तराई मधेशका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ । तराईका केही ठाउँमा केही दिनदेखि घाम नै लागेको छैन । लगातारको बाक्लो हुस्सुका कारण जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको हो ।
चिसो बढेपछि धेरैजसो ठाउँका चोकचोकमा तातो न्यानो हुन आगो बाल्न थालिएको छ । हिउँदे वर्षासँगै तराईका जिल्लामा लगातारजसो बाक्लो हुस्सु, कुहिरो लागेको छ । चिसोका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् । चिसो बढ्दा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ । केही विद्यालयले जाडो बिदासमेत दिन थालेका छन् । चिसोका कारण सहर बजार तथा सार्वजनिक ठाउँमा चहलपहल घट्न थालेको छ ।
आज पनि तराईका धेरैजसो ठाउँमा बाक्लो हुस्सु, कुहिरो लागेको छ । केही ठाउँमा बेलुकासम्म नै कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए । भोलि बुधबार पनि बाक्लो हुस्सु, कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाकारि दिएको छ । तराई बाहेकका जिल्लामा भने आज घाम लाग्ने अनुमान छ ।
आज बेलुकादेखि भने नेपालमा फेरि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव पर्ने मौसमविद् पौडेलले जानकारि दिए । सुदूरपश्चिम हुँदै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण भोलि र पर्सि देशका धेरै ठाउँको मौसम बद्ली हुने आँकलन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा बुधबार र बिहिबार हल्का पानी पर्ने अनुमान छ भने उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद्हरुले बताएका छन् ।
चिसो बढेसँगै शरिरको तापमान घटेर विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गर्दछन् । वयश्क भन्दा बृद्धाबृद्धा र बालबालिका बढी प्रभावित हुने भन्दै चिकित्सकहरुले सावधानी अपनाउन सचेत गराएका छन् । न्यायो लगाउन, मनतातो खानेकुरा खान र झोलिलो पदार्थको सेवन गर्न चिकित्सकले सबैलाई सुझाब दिएका छन् ।